Ihowuliseyili BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Super slow ukukhululwa uhlobo oluligcina ugcina uhlobo) mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
I-BT-303 sisizukulwane esitsha sokukhululwa kancinci kunye nokugcina isiselo esinxilisayo sokugcina isiselo esinxilisayo esenziwe kwi-TPEG ngokusetyenziswa kwepolymerization yasimahla, kwaye iqela elitsha lokukhululwa elizinzileyo laziswa kulungelelwaniso. Ngaphantsi kwemeko yealkali yekhonkrithi, iqela elikhupha kancinci kulwakhiwo lweemolekyuli linokulikhulula kancinci iqela elinomsebenzi osasazekayo, lidlala indima yokuqhubeka nokusasaza isamente, ukuze kufezekiswe indima yokuthintela ukulahleka kwekhonkrithi Inezinga lokunciphisa amanzi elisezantsi, kodwa inendlela ephezulu yokukhusela ukusebenza. Isetyenziselwa ubukhulu becala ikhonkrithi eneemfuno eziphezulu zokukhusela ukusebenza kokukhusela, kwaye iimveliso zayo zisetyenziswa kakhulu ekumpompozeni ikhonkrithi, ukuhamba ngamandla okuzenzekelayo kunye nokuqina okuphezulu kwekhonkrithi yokusebenza kunye nekhonkrithi yokuthengisa kuloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, Expressway, hydro-amandla kunye nezinye iiprojekthi ezinkulu zobunjineli.
1.Ngokusebenza okuphezulu okuphezulu, unokuvumela ikhonkrithi 2ump ngaphandle kokulahleka
Isantya sokunciphisa amanzi asezantsi asisetyenziswa sodwa, kufuneka sidityaniswe nohlobo lokuncitshiswa kwamanzi kotywala bomama.
I-3.Nge-viscosity ephantsi kunye ne-thixotropy, ilungele ngakumbi ikhonkrithi enomlinganiso wesamente wamanzi asezantsi
Ixesha lokukhululwa lihamba kancinci kunelo le-BT-302, ngokubanzi emva kweyure e-1 (notshintsho lwezixhobo zekhonkrithi, kuya kubakho ukuguquguquka okuthile).
Inkangeleko ulwelo olumthubi olukhanyayo
Ukuxinana (g * cm3) Umhla: 1.02-1.05
Ixabiso le-PH 6-8
Iziqulatho eziqinileyo 40±1
Cement fluidity MM 270mm ngeyure
Ireyithi yokunciphisa amanzi 5%
ukwanda kwenqanaba lokopha 0%
Uxinzelelo lokopha 30%
Umxholo womoya 3%
Umyinge wamandla oxinzelelo lwe-3D 190MPa
7D ratio amandla 170MPa
Umlinganiso wamandla oxineneyo wama-28D 150Mpa
1.Applicable kuqwalaselo lwekhonkrithi yamandla okuqala, ikhonkrithi ekhawulezileyo, ikhonkrithi yangaphambi kokufakwa, ikhonkrithi yangaphakathi, ukuhamba kwekhonkrithi, ikhonkrithi yokuzenzela, ikhonkrithi enobunzima, ikhonkrithi ephezulu yokusebenza kunye nekhonkrithi ecacileyo, zonke iintlobo zezakhiwo zorhwebo nezoluntu kwikhonkrithi yokufakwa endaweni kwekhonkrithi, ngakumbi ikhonkrithi yorhwebo ekumgangatho ophantsi.
Ingasetyenziswa ngokubanzi kumgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, amandla enyukliya, ukugcinwa kwamanzi kunye neeprojekthi zamandla e-hydro, iindlela ezingaphantsi komhlaba, iibhlorho ezinkulu, iindlela zokudlulisa, amazibuko kunye neewarves kunye nezinye iiprojekthi ezinkulu neziphambili zesizwe.
3. Esebenzayo kuzo zonke iintlobo zokwakhiwa kwemizi-mveliso noluntu kunye nezikhululo zokuxuba eziphathekayo zekhonkrithi.
1.Le mveliso ngumbane ongenambala okanye okhanyayo otyheli. Ubungakanani:Ngokwesiqhelo ，Sebenzisa i-0-30% yotywala bukamama ngokunciphisa amanzi okusela utywala, kwaye udibanise nezinye izinto ezincinci ukwenza iarhente yokunciphisa amanzi. Umthamo we-arhente yokunciphisa amanzi ngokubanzi yi-1% ~ 3% yesisindo esipheleleyo sezinto zokuqinisa.
Phambi kokusetyenziswa kwale mveliso okanye utshintshe uhlobo kunye nebhetshi yesamente kunye negrabile, kuyimfuneko ukwenza uvavanyo lokuziqhelanisa nesamente kunye negrabile. Ngokuvavanyo, yenza umyinge wearhente yokunciphisa amanzi
3.Le mveliso inokusetyenziswa ngokungatshatanga (Ngokwesiqhelo ayinakuyisebenzisa iyodwa) Inokudityaniswa nokunciphisa amanzi ngotywala kunye nokuseta ukubuyisela umva kotywala ukunciphisa ukulahleka kwekhonkrithi. Okanye ikhompawundi kunye nezixhobo ezisebenzayo zokufumana ii-admixtures nge-retarder / amandla okuqala / i-antifreeze / imisebenzi yokupompa. Indlela yesicelo kunye neemeko kufuneka zichongwe ngovavanyo kunye nokudibanisa itekhnoloji
Le mveliso inokusetyenziswa kunye nezinye iintlobo zezinto zokuncoma ezinje ngearhente yamandla kwangoko, iarhente yomoya, retarder, njl., Kwaye kufuneka kuvavanywe ngaphambi kokusetyenziswa. Musa ukudibanisa naphthalene uthotho lokunciphisa amanzi.
I-5.Conkrete yesamente kunye nomxube wokuxuba kufuneka ugqitywe luvavanyo, Xa usebenzisa, uxutywe kunye nomlinganiso wamanzi kufuneka wongezwe okanye wongezwe kumxube wekhonkrithi ngaxeshanye. Ngaphambi kokusebenzisa, uvavanyo lokuxuba kufuneka lwenziwe ukuqinisekisa umgangatho wekhonkrithi
6. Xa kukho izinto zokuncamathelisa ezisebenzayo ezinjenge-fly ash kunye ne-slag kumyinge wekhonkrithi, inani learhente yokunciphisa amanzi kufuneka ibalwe njengesixa esipheleleyo sezinto zokuqinisa.
Package: 220kgs / igubu, 24.5 iitoni / Flexitank, 1000kg / IBC okanye ngokwesicelo
Ukugcina: Kugcinwe kwindawo yokugcina umoya eyomileyo ye-2-35℃ Kwaye ipakishwe ilungile, ngaphandle kokutywinwa, ubomi beshelfini ngunyaka omnye. Khusela elangeni ngokuthe ngqo nakwikhephu
Egqithileyo I-BT-302 i-Polycarboxylate superplasticizer 40% (uhlobo olulondolozayo oluphezulu)
Okulandelayo: Polycarboxylate Superplasticizer Powder
I-Polycarboxylate esekwe kwi-Superplasticizer
IPolycarboxylate Ether Superplasticizer
Uhlobo oluqhelekileyo lwePolycarboxylate Superplasticizer